true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 6 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Ingxenye ebaluleke kakhulu yokuhlela nama-targets kuyisihloko sokuhlelela amasu. Lendaba kumele ifundwe ngokuningiliziwe, kufaka phakathi nencazelo yegama elithi “isu” nokuthi ukuhlelwa kwamacebo kuhambelana kanjani nezinye izindawo zabaphathi.
Igama elithi “isu” livela egameni lesiGrikhi, strategos, elisho “u-general” umuntu ohola noma aqondise ibutho futhi anqume ukuthi amasosha azokwenzani. Igama elithi-trategos uqobo lenziwa kusuka kuma-stratos (igama lesi-Greek elisho ukuthi “amabutho”) kanye no-agein (igama lesi-Greek elisho “ukuhola”).
“Isu” lichazwa njengecebo lendlela yokuqondisa amabutho empini noma ingxenye yempi.
Kule ncazelo yasekuqaleni, “isu” libuye lisho icebo noma indlela yokuqondisa noma yimuphi umsebenzi ukuze kufinyelelwe kumgomo othile noma umphumela.
Lolu uhlobo lokuhlela olwenziwa ezingeni eliphezulu leqembu noma lenkampani ngabaholi nabaphathi balo. Yibona abanawo umbono obanzi wawo wonke umsebenzi, ngakho-ke yibona abangathola isu leqembu lonke.
Isu libeka amacebo azofeza okuthile okukhulu eqenjini. Kubonisa nendlela yokusebenzisa izinsiza (imali, abasebenzi, okokusebenza, izimpahla, njll.) ngendlela ehlakaniphile noma izindlela ongazisebenzisa ukuvimba isitha noma ukunqoba izithiyo ezikhona ukuze uzuze umphumela.
Ngoba isu lisetshenziswa ezingeni eliphezulu leqembu, kuyicebo eliphakathi futhi lisebenza njengesambulela esihlanganisa imisebenzi yamazinga angezansi kwawo.
Konke lokhu kusitshela ukuthi ukuhlela amasu kuyini.
Ukuhlelela amasu kunikeza ukuqondiswa kwemisebenzi yawo wonke amazinga aphansi eqembu. Amazinga aphansi anamacebo awo nezinhlelo zawo namaphrojekthi. Lokhu kwenziwa ukuthi yiziphi izindawo zabo ezincanyana okumele babhekane nazo futhi lezi zinhlelo ezincane ziyahlanganiswa ukuze kusizakale ukufeza inhloso enkulu.
Lokhu kunikeza ukubuka okucacile kokuthi kungani ukuhlela okuhle kubaluleke kakhulu nanokuthi kungani kufanele kwenziwe yibhodi yokuhlela ephezulu ukuze abaphathi basebenze futhi baphumelele.
Kwenzakalani uma ukuhlelwa kwamasu kushoda? Kahle, kwenzekani empini uma kungekho ukuhlela kwamasu okwenziwayo?
Amaqembu amasosha engalwa ezindaweni ezibalulekile, njengokuzama ukulawula ibhuloho okuyindlela elula yokuwela umfula noma endaweni enamasosha amaningi ezitha okufanele alwe nawo. Lamaqembu amasosha angashiywa ngaphandle kwamanye amasosha noma izimpahla zokuwaxhasa. Ngasikhathi sinye, amanye amaqembu amasosha alwa ezindaweni ezikude kakhulu kude nalapho kwenzeka khona konke ukulwa okukhulu, ngakho-ke awasizi lapho edingeka khona. Izinsiza nezinhlamvu kungahanjiswa endaweni okungafanele noma kungathunyelwa nhlobo. Umphumela kuzoba ama-oda enye evimba enye, ukuxhumana okungathunyelwanga ezindaweni ezifanele, izinsizakusebenza (amasosha, izinsiza, izinhlamvu, njll.) ezichithiwe kanye nezimpi ezilahlekile. Ngaphandle kwecebo, akukho ukuhlangana phakathi kwezingxenye ezahlukahlukene, ngakho-ke yonke into igcina ididekile, ingahlelekile futhi iphokophele enhlekeleleni.
Yini umehluko phakathi kwalokhu ne-push eqinile, ehlanganisiwe yokufinyelela umgomo!
Ungabona ukuthi isu lingasebenza kanjani kunoma yiliphi iqembu nokuthi kungani kufaneleke lenziwe emazingeni aphezulu. Igama elibalulekile lapha lithi “kwenziwe.” Akunakunakwa noma kuwiswe ngaphandle. Akumele kwenziwe, kepha ngaphandle kobufakazi bokuthi kwenziwe. Ukuhlela amasu kufanele kwenziwe bese kwaziwa okungenani emazingeni aphansi alandelayo okuphatha. Ukuxhumana ngale ndlela kanye nokuqondisa ngqo i-targeting kungenziwa.
Injongo Nokuhlela Amasu
Uhlelo lwesu luqala ngokuqaphela ukuthi kunenkinga okufanele isingathwe noma kufinyelelwa inhloso. Ihlala ifaka injongo noma izinjongo zingafezeka.
Lapho injongo seyitholakele, amasu ohlelo ahlukahlukene manje asengabhalwa kususelwa kulenjongo.
Isibonelo, iqembu lomphakathi libheka abantu bedolobha futhi bathola ukuthi inkinga kwabaningi ukuntuleka okuphezulu kokungasebenzi endaweni yabo. Iqembu linquma ukuphatha lokho futhi, ngalenjongo emgqondweni, lisebenza ngohlelo oluhle olufaka ukuletha imisebenzi eminingi endaweni. Iphinde isebenzise amacebo okukhuphula kanye nokwenza ngcono imfundo yabantu abadala ukuze abantu bendawo bakwazi ukufunda amakhono amasha.
Okokuqala, amalungu amaningana eqembu lomphakathi ahlela imihlangano phakathi kwezinkampani ezifuna abasebenzi kanye nabantu emphakathini abafuna imisebenzi. Futhi kuma-targets ezemfundo, amanye amalungu aleli qembu lomphakathi ayaxhumana futhi aletha emphakathini amakilasi ahlukene ezemfundo nezinhlelo zokuqeqesha. Lezi zinyathelo nezinye ezisohlelweni zonke zizosiza ekuthuthukiseni indawo yokuqashwa edolobheni futhi zilethe ukuthuthuka esimweni esivele sikhona (indlela izinto eziyiyo njengamanje).
Eqinisweni, ISU KUNGASHIWO UKUTHI UNGAKWENZA KANJANI NGEMPUMELELO FUTHI USHESHE UTHOLE INJONGO EKUSEBENZENI KWINDALO YANGEMPELA EBONAKALAYO NGESIVININI FUTHI KUNGABI NAMA-FLUBS (AMAPHUTHA NOMA AMAPHUTHA).
Noma yiluphi uhlelo lwamasu lungafaka nezenzo ezinkulu ezimbalwa ezizophathwa yizingxenye zeqembu ukuze kufezeke injongo. Lezi zinikeziwe ngamagama ajwayelekile, ngoba ziyisitatimende sokuqala kokuhlela okwenziwe. Kuwo, amancane, amasu esikhashana angakhiwa. Kodwa zonke lezi zinto kumele zihlangane ndawonye.
Inkinga okufanele isingathwe: Inkampani Yamaphepha ye-ABC ibilokhu inomugqa ophumelelayo wemikhiqizo yamaphepha futhi iyaqhubeka nokukhiqiza lokhu. Kepha isebenza nabathengi bayo abajwayelekile kuphela. Akukhona ukuphuma phandle ukuyothola amakhasimende amasha. Ngenxa yakho lokhu, inkampani isizophuka ngokushesha futhi abaphathi bayo sebehamba beyosebenzela ezinye izinkampani lapho kunethuba elengeziwe lokwanda (ukwanda kwesilinganiso noma uhlobo lomsebenzi owenziwa yinkampani noma ibhizinisi).
Injongo: Beka inkampani yamaphepha lapho eyenza zonke izingxenye zomsebenzi wayo futhi efinyelela kuwo wonke amakhasimende ayo, amadala namasha, ngokuthengisa okuphezulu kwemikhiqizo ekhona nemisha. Le nkampani iyaqhubeka nokusebenzisana namakhasimende ayo ajwayelekile futhi ithengise okungaphezulu futhi ngakho-ke yenyusa imali etholwa yinkampani. Ngazo zonke lezi zenzo, yakha idumela layo (umbono abantu abanayo ngokuthile) njengebhizinisi eliphumelelayo, lesimanje elithola imali futhi, ngoba liyaqhubeka nokukhula, liba namathuba wokunwetshwa.
Uhlelo lwamasu: Ukuhlelela amasu, ngokusekelwe kulokho okudinga ukusingathwa nenhloso, kungahle kwenzeke okufana nalokhu:
1. Isenzo esibaluleke kakhulu esidingekayo ukuyeka ukuba-broke ukuqala isigaba sokuthengisa esisha. Kepha inkampani kufanele yenze lokhu ngaphandle kokuvimba noma yiziphi izinto ezithengiswayo ezenzeka manje futhi azikwazi ukuqeda ezinye izigaba zenkampani. Uphiko olusha lokuthengisa luzoqala ukuthola abathengi abasha ngomugqa wamanje wemikhiqizo evela (a) ezitolo ezithengisa imikhiqizo yamaphepha, (b) amabhizinisi amakhulu athengisa imikhiqizo yamaphepha ezitolo kanye (c) noku-oda, indlela yokuthengisa izinto abantu abazikhetha kuzo abazifunayo, ngokuvamile kwikhathalogu, bese bezithumela kubo ngeposi. I-reps ethengisayo bezentengiselwano abake basebenza ekuthengiseni ngaphambilini futhi abanamarekhodi okukhiqiza amahle kakhulu (imibiko yokuthi umuntu ukhiqize malini ngohlobo oluthile lomsebenzi) kuzodingeka aqashwe ukuze akwazi ukuqhuba ngasinye salezi zingxenye. Amanye ama-reps amaningi wokuthengisa angochwepheshe azodinga ukutholakala. Laba bengaqashwa ngemali ephansi eyisisekelo bese benza iningi lemali yabo kumakhomishini (imali eyengeziwe ekhokhelwa umuntu ngokuya ngokuthi uthengise malini). Le misebenzi yokuthengisa ingangezwa futhi isabalaliswe endaweni enkulu ngisho nangokwengeziwe ngokuqasha abaphathi bendawo ngayinye, ama-reps aqala amanye ama-reps okuthengisa ngisho nama-reps atholakala ukwenza emnyango ngo mnyango. Njengengxenye yalolu hlelo, amacebo lwekhomishini nezinto zokuthengisa zizodinga ukwenziwa, kanye nezindlela zokukhangisa nokwenza imikhiqizo yaziwe ngezinto ezinjengokunikezelana, ezentengiso, amasampula amahhala, njll. Lezi izinto zonke kufanele zenziwe ngaso leso sikhathi ukukhulisa ngokushesha ukuthengisa, ukuvimbela ukulahleka okuqhubekayo nokukhulisa inzuzo yenkampani.
2. Ngenkathi lezi izinyathelo ezingenhla zenzeka, amarekhodi wokuthengisa nokukhiqiza wabasebenzi abakhona adinga ukubuyekezwa. Noma yisiphi isisebenzi esingakhiqizi sizoxoshwa ukuze inkampani igcine kuphela labo abakhiqizayo. Amarekhodi enkampani emali ayitholayo nemali esetshenzisiwe adinga ukuthi ahlolwe futhi uma lokhu kukhombisa ukuthi kukhona ukweba okwenzekile, lokhu kuzodinga ukuphathwa ngesinyathelo esifanele esisemthethweni. Ngamanye amagama, abasebenzi kanye nezinqubo zamanje kufanele babuyekezwe ngokuphelele futhi balungiswe njengoba kudingeka, ngenkathi kwanda umkhiqizo.
3. Ucwaningo ludinga ukuthathwa kumakhasimende akhona kanye namakhasimende amasha angatholakala ukuthola ukuthi yimiphi imikhiqizo emisha yamaphepha abantu abayifunayo noma abazoyithenga. Ngokuya ngemiphumela yocwaningo, umugqa omusha wemikhiqizo yamaphepha ungakhiwa, ukhiqizwe, ukhangiswe futhi uthengiswe ezindaweni eziningi. Uhlelo lokusungula umugqa omusha wezimpahla luzodinga ukumboza ukuhlela uphiko olusha lokukhiqiza (kufaka phakathi abaphathi balo, abaqambi kanye nabasebenzi) kanye nanoma yimiphi imishini noma imishini eyengeziwe edingekayo. Uhlelo lolo futhi kumele lufake ama-targets okusingathwa ubuhlobo nomphakathi (umkhuba wokugcina noma wokuphucula imizwa yobungani phakathi kweqembu nabantu abangaphandle kweqembu). Futhi kufanele kufake phakathi izinto okufanele zenziwe ukukhangisa nokuqhuba yombili imikhiqizo emisha nemidala yokuthengisa okukhulu kokubili. Lokhu kuhlela kuzofaka nezindlela zokwenza ukuthi inkampani ihlale ingumholi ekwakhiweni kwemikhiqizo emisha yamaphepha, ngakho-ke kunamathuba amaningi abaphathi abathanda ukwanda.
Loluhlelo lwamasu olunje lulungisa isimo esibi inkampani ekuso. Kwakha nendawo enenzuzo enkulu futhi eyandayo ngekusasa layo yonke inkampani.
Kulolu hlelo lwamasu, ukuhlela okwenziwe ngobuhlakani kuzokwenziwa. Ukuhlelela okunobuhlakani kusho ukuthatha ama-targets abanzi amasu abalulekile futhi uwenze abe yizenzo eziningi ezincane eziqondile futhi ezi-targeted ngqo, ukuze kwenziwe ukuthi ukuhlelwa kwamasu kwenzeke.
Kuzoba nabantu abaningi abasebenza kulokhu futhi bonke kuzofanela baqonde injongo futhi bavumelane nalezi zinhlelo. Othile ofunda ngalezi zinhlelo angahle angakuboni ukubaluleka kwazo ngaphandle kokuthi aqonde imibandela ekhona enkampanini kanye ne-purpose isiyonke uhlelo lokuhlela okufanele ilusingathe. Ngalokhu, bangakwazi ukufeza ukuhlela kwabo ngobuhlakani.
Kujwayelekile kakhulu lokhu ekusebenzeni kahle kwecebo lokuthola ukuthi amacebo athile wokuphamba adinga ukushintshwa noma kufakwe amanye amasha. Amanye ama-targets adinga ngisho ukwehliswa ohlelweni ngoba awadingeki. Ukuphathwa okunobuhlakani kohlelo oludingekayo kudinga ikhono nokuqonda, ngakho-ke lokhu kuvunyelwe.
Le ncazelo engenhla ikhombisa ukulandelana okwenziwa ukuthuthukisa uhlelo lwamasu, kuqala ngenjongo enhle ukuthi ezinye izenzo zingahlanganiswa nazo. Bese isenzo sohlelo esifanelekile esidengekayo ukufeza injongo singafezeka. Futhi ekugcineni, uhlelo lobuhlakani bokuletha amasu ohlelo akhona angalandela.
Ngale ndlela, iqembu lingachuma futhi liphumelele. Lapho wonke amandla nama-force kuqondaniswa ukuze kuqhutshekiselwe phambili ndawonye, inani elikhulu lamandla lingadalwa.
Ngakho-ke chaza injongo bese kulowo msebenzi uchaze ukuthi iliphi isu elizosetshenziswa ukufeza inhloso. Lokhu-ke kudala ukuxhumana kusuka kwinjongo kuya endaweni yokuhlela ngamasu.
Lapho uhlelo lobuchwepheshe olunenhloso selufezekile, lubanjwa yizinga elisezansi elilandelayo lomyalo bese luphendulwa ekuhleleni okuhle.
Okunobuhlakani Okuqhathaniswa Namasu Okuhlela
Isu lihlukile kumaqhinga.
Leli yiphuzu okufanele liqondwe ngokucacile ngamazinga ahlukahlukene wokuphatha.
Kunomehluko omkhulu kakhulu impela phakathi kohlelo lamasu nohlelo olunobuhlakani.
Ukuhlela kweqhinga kusetshenziselwa ukuzuza okuthile okuncane, okufana nempi, futhi kusetshenziswa amasu okuphumelela ukuze uzuze impi ephelele.
Uhlelo lobuchule uhlelo olukhulu, olusezingeni olude lokuqinisekisa ukunqoba kanti necebo lokuphamba kahle lisho kahle ukuthi ngubani okufanele asuse lapho futhi kufanele enzeni ngaleso sikhathi.
Uhlelo lobuhlakani kufanele lusebenzisane futhi lufezekise uhlelo lwecebo. Futhi kufanele yenze lokhu ngqo, ama-targets ayenzekayo.
Ngokuyinhloko, lokho ukuphatha.
Ukubhologa Phakathi kweNjongo kanye Neqhinga
Iphutha elilodwa elivame ukwenziwa izisebenzi ezingaqeqeshekile ukugxuma kusuka kwinjongo kuye ekuhleleni kweqhinga, ukushiya uhlelo lwecebo. Lokhu ngeke kusebenze ngoba isu lobuhlakani kufanele lihambisane nohlelo lwamasu ukuze liphumelele.
Iphuzu okufanele liqondwe lapha ukuthi ukuhlela amasu kudala ukuhlela ngobuhlakani. Isu kufanele lisebenzeke ukuze injongo ifezeke. Ngokusekelwa kulelocebo, khona-ke usebenza izindlela zokwenza ubuciko okufanele zenziwe ukufeza isu. Kepha uma uzama ukweqa usuka kwinjongo uye kwiqhinga, unganaki isu, amacebo akho ngeke aveze imiphumela oyifunayo.
Ngakho-ke phakathi kwenjongo namaqhinga kuhlezi kunesinyathelo sokuhlela amasu. Singasho ukuthi uhlelo lwamasu luyindlela yokwenza injongo uqobo isebenze.
Empeleni uhlelo oluhlobene nokukhalipha (ukuhlakanipha kanye nokuba nemibono emihle).
Umuntu angahle azi konke mayelana nenjongo futhi aqhamuke nesibalo sama-targets okuhlolwa ahambisana nakho. Futhi kungenzeka ukuthi ama-targets angasebenza, ngokwawo. Kepha injongo ifanele ukuphatha okuthile. Ngakho-ke uma zingekho izindlela zamasu zokwenza lokhu, izinkinga ezifanayo zingaqhubeka nokuba khona.
Ukubeka ibhuloho langempela lapho (isu) phakathi kwenjongo kanye namaqhinga kusho ukuthi injongo izokwazi ukuphumelela.